USherlock Holmes Ngokususelwa 'Kwama-Irregulars' Ukhanseliwe kuNetflix Ngemuva Kwesizini Eyodwa
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo USherlock Holmes Ngokususelwa 'Kwama-Irregulars' Ukhanseliwe kuNetflix Ngemuva Kwesizini Eyodwa
by UTrey Hilburn III Kwangathi 4, 2021
Ama-Irregulars isivele ifinyelele ekugcineni kwayo kuNetflix. Uchungechunge olwalugxile emhlabeni ozungeze uSherlock Holmes noDkt Watson aluzange luhlale isikhathi eside ngemuva kokuqala okokuqala ngqa kulo nyaka.
OkungajwayelekileUlandele iqembu lentsha elenzelwe ukuthi lisetshenziselwe ukuxazulula amacala kaDkt Watson futhi Sherlock Holmes. Izinhlamvu ezimbili eziyizithonjana beziyindlela eyehluke kakhulu yokujwayelekile kwazo. Babeziphethe kabi kwezinye izici beshiya intsha eyayenziwa abaphenyi bayo kanye nokugxila kombukiso.
Uchungechunge lwenze kahle ngokwanele ukuthi lungene kwi-top-10 slot yeNetflix ngempelasonto yalo yokuqala emuva ekupheleni kukaMashi. Ngakho-ke, kufanele ukuthi yenze kahle ngandlela thile.
Ama-Irregulars obekuncike emsebenzini womlobi wezithonjana u-Arthur Conan Doyle odlala indawo kaThaddea Graham, McKell David, Jojo Macari, Harrison Osterfield noDarci Shaw, Clarke Peters noHenry Lloyd-Hughes owayedlala indawo kaSherlock Holmes.
Ngisola ukumaketha kulokhu. Uchungechunge belungakaze lucace ngokusobala ukuthi lwaluthini. Iphinde yahlela ukungcwaba i-lede uma ifika ezingeni lokubandakanyeka kukaDkt Watson noSherlock Holmes.
Ngabe ubuke Ama-Irregulars? Ingabe udabukile ukuyibona ihamba? Sazise esigabeni sokuphawula.
UBarney idayinaso uze ukuzokudla ku-Resident Evil: Village. Bheka ividiyo ye-gameplay lapha.
Arthur Conan DoyleikhanseliweUDkt WatsonNetflixsherlock holmesAma-Irregulars
UBarney Ukuthanda Ukufa 'Kwabahlali Ababi: Idolobhana'
UJason Blum Umemezela i-2nd Blumfest Yonyaka ikule Okthoba